Jajabinta CO2 Laser Resurfacing Sida ay u shaqeyso: Qalabka kaarboonka dioxide jajabka ah (CO2) qalabka dib u soo saarida laser waxay adeegsadaan iftiinka infrared-ka ee lagu sii daayo tuubbo kaarboon dioxide ka buuxsantay si loo abuuro nabarro microthermal ah oo ku jira unugyada la beegsaday. Maaddaama iftiinka uu nuugo maqaarka, nudaha ayaa uumi baxa, oo keena ...
Haddii aad si adag isugu dayday inaad ka takhalusto dufanka calool adayga, gacmaha jacaylka iyo noocyada kale ee dufanka jidhka, shaki la'aan inaad fiiro gaar ah u yeelatay xayeysiisyada telefishanka ee badan ee CoolSculpting. Xayeysiisyadan waxay muujinayaan awoodda daaweyntan aan faafin karin ee looga takhalusi karo dufanka hadhay cuntada iyo jimicsiga ka dib ...
808 Timo Goynta Joogtada ah ee Bilaa Xanuunka ah
Nidaamka qaboojinta safayrta bilaa xanuunka ah wuxuu hubiyaa in daaweyntu ay ammaan tahay oo aan xanuun lahayn. Ammaan Teknolojiyadda ka dambeysa leysarka Diode 808 waxay xaqiijineysaa in maqaarku dhuuqayo leysarro yar, yareynta halista midab-kala-sooca. Si dhakhso ah Usocodka degdegga ah, ballaca garaaca wadnaha dheer, barta weyn, iyo faa'iidada qaboojinta weyn ayaa ka dhigaysa ...